Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Fedora 21 !!! | Site na Linux
petercheco | | Nkesa
Ndewo ndị enyi sitere na DesdeLinux, taa, ewetara m nkuzi nkuzi ntinye Fedora 21 na ndabara Gnome gburugburu ebe obibi. Tupu dị ka ọ dị na mbụ ụfọdụ oyiyi:
Gaa maka ya…
Ebee ka m ga-enweta Fedora 21?
Versionsdị ndị ọzọ dị ka KDE, LXDE, XFCE ma ọ bụ Mate nwere ike ibudata ebe a:
Ugbu a, anyị na-emeghe ọnụ na n'okpuru mgbọrọgwụ anyị igbu:
wget http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-21.noarch.rpm && yum wụnye rpmfusion-free-release-21.noarch.rpm wget http://download1.rpmfusion.org /nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-21.noarch.rpm && yum wụnye rpmfusion-nonfree-ntọhapụ-21.noarch.rpm
Download na-ebudata ngwugwu ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/ na-ahọrọ ụdị nke yum na pịa pịa ngwugwu ebudatara.
Ntinye nke nchịkọta kachasị eji:
yum melite && yum wụnye java-1.8.0-openjdk flash-plugin icedtea-web firefox thunderbird unrar zip unzip p7zip vlc libreoffice gimp wget mc htop gnome-tweak-tool filezilla system-config-firewall brazier
yum wụnye gstreamer gstreamer-plugins-ezigbo gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-jọrọ njọ gstreamer-ffmpeg
Wụnye iwupụta ihe dị mkpa (nhọrọ):
yum tinye otu "Ngwaọrụ mmepe" "Ọbá akwụkwọ mmepe"
Na njikere. Ha nwere Fedora 21 ha :).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Fedora 21
Ihe 69 kwuru, hapụ nke gị
Daalụ @petercheco maka ịkekọrịta, enyebeghị m Fryer ohere ruo ogologo oge, ọ bụ ezie na ikekwe ụfọdụ ndị na-achọghị SystemD ga-agba ndụ ma tinye #Fuuuudora.
Ka anyị melite a mebere otu si n'ebe na-ahụ otú ọ na-aga.
Kedu ihe dị ịtụnanya na m na-ekwu na m na-eji windo 8.1 eme ihe, mgbe m na-eji Windows 10 Mmepụta Preview na ọrụ m ...
Anyi nabata gi. Okwesiri ka anwale ya :).
Great distro, anyị ga-anwale na a mebere igwe otú o si arụ ọrụ.
Fedora na abia na gnome tweak tool? n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị, M nwere ike ikwu na ọ 🙂
N'ime ntuziaka ahụ ka nrụnye ya dị ...
N'ime ntuziaka m, otu esi etinye ya ...
Ugbala 666 dijo
Ọ na-etinye na mmelite ndị dị n'elu. Daalụ maka post.
Ihe kachasị mkpa na nke mbụ bụ iwepu mkpofu ahụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa wee tinye ezigbo desktọọpụ dị ka KDE [/ troll]
Ọfọn (nke ọma, ihe dịbu na ọkara dịkarịa ala xD) enwere ezigbo nchekwa maka Fedora nke ekwuru obere ma mana maka m ha dị oke mkpa (na onye ọ bụla tinye ha, echere m na ha ga-adịkwa)
yum wụnye http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/free/fedora/russianfedora-free-release-stable.noarch.rpm
yum wụnye http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/nonfree/fedora/russianfedora-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Chromium, Skype, Opera, rar, flash, Java 1.6 na ndị ọzọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla xD. N'ihi eziokwu ahụ bụ na repo a na-enye ihe ọkpụkpọ ọkụ, ị nwere ike ime n'enweghị adobe repo.
Postinstallerf: A repo nwere ngwanrọ dịgasị iche iche, ọkachasị multimedia, ndị ntụgharị, wdg. Ọ bara ezigbo uru, nwoke ahụ na weebụsaịtị a na-ekwusi ya ike:
Later nwere ike mechara wụnye a ụdị software center na nke a:
yum wụnye postinstallerf
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịwụnye ụfọdụ mmemme ma mee ụfọdụ nhazi. Ihe jọgburu onwe ya bụ na mmemme a na-etinye Dropbox repo na ọ bụrụ na iji Gnome eme ihe, ọ nweghị mmasị na chromium repo nke na-enweghị mmasị ebe ọ bụ na Russianfedora na-enye ngwugwu a. M na-eji post azụmahịa omume ngwa mgbakwunye ihichapụ ndị repos oge ọ bụla na ngwa na-emelite.
N'ikpeazụ, repo a dị ntakịrị:
Rpm-sphere: O nwere ọtụtụ puku ngwugwu, ihe ọjọọ bụ na ọ bụghị ezigbo ntụkwasị obi, enwere nchịkọta ị wụnye ha ma ha anaghị arụ ọrụ n'ụzọ ọ bụla na nchịkọta ndị ọzọ agbajiri, mana ọ bara uru maka ngwugwu ndị na-arụ ọrụ na ọtụtụ gtk na akara ngosi gburugburu ya na-enye. M arụnyere ụfọdụ cheesi engines, na sopcast graphical interface na ihe ọzọ. Ana m akwado ịkwado ya, ị maghị mgbe ị ga-achọta ihe dị gị mkpa.
Enwebeghị ụdị repo maka Fedora 21. Otú ọ dị, repo ga-arụ ọrụ ma ị nwere ike gbanwee ya mgbe e mesịrị site na ịmegharị faịlụ ahụ iji tụọ aka na Fedora 21. Repo na-arụ ọrụ, site n'ụzọ, mgbanwe ikpeazụ bụ site na December 1st.
na-egwu mmiri dijo
petercheco, ... lee etu sistemụ siri dị na Fedora, ... ị bụ ọkachamara na Linux na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ.
N'agbanyeghị, mgbe ị pụta na nke abụọ ndu na-esi hazie na icho mma FreeBSD na Xfce na ebughibu?,… .. ekele.
Zaghachi ka nando
Chupamedias, anyị na-agwa ndị a.
Ga-abụ olu nzuzu na-amasị gị ịkparị ndị mmadụ na enweghị isi.
Ndewo Nando na-ekele gị nke ukwuu. N'oge m na-eji firewall na-egwu egwu ma na-eme ihe nzuzu na ngwugwu ihe nkesa. A post banyere ya ga-abịa n'oge na-adịghị anya mgbe ahụ FreeBSD na Gnome-shei nke nwere oriri nke 230 megabytes nke Ram :).
Na-ele anya na akụkụ nke abụọ nke akwụkwọ ahụ. Ekele peterchecho na akụkụ nke mbụ ...
I gwa gi eziokwu, a na m eche echiche ịhapụ Debian wee kwaga na FreeBSD, m gbalịrị ya ọtụtụ afọ, mana ugbu a na mgbanwe pkg, ọ kaara m mma.
Ọ bụ ezie na naanị ihe na-eme ka m belata (n'ihi na akwadoro m na o nwere mmemme niile m chọrọ) bụ etu esi eme Wi-Fi. Ugbu a na GNU / Linux, enwere wicd, mana m hụrụ na anaghị ebutere ya na FreeBSD na m na laptọọpụ m na-ejikọ na wifis dị iche iche, n'ihi na ahụrụ m ntakịrị osisi iji gbanwee faịlụ njikọ (Echere m rc.conf na wpa). Ved doziela okwu a? Ọ bụrụ na ị na-eji wifi ...
Daalụ maka ihe niile…
Ekwadoro m ka ị nwaa wifimgr ka ijikwa wifis gị.
pkg wụnye wifimgr
Ebe obu na ikwuru FreeBSD, o ga adi nma inwee ndu zuru oke iji tinye gnome, nihi na ahurum onwe m aka na ntinye ahu o nweghi ihe obula biara na gburugburu ebe ozo.
Lee ezigbo onye maara ihe Peter bụ !!!
Dịka onye ọkachamara GNU / Linux kwuru 🙂
Anyi choro ndu nke abuo ichoro FreeBSD xfce biko, achoro m ya ka odi ka fedora, ya na ihe ngosi ya di egwu.
Budata ngwungwu ndị a:
Extract wepu ha ma mepụta folda abụọ n'ụlọ gị. Otu na aha .icons na otu na aha .mgbe
Na folda .icons ị pinye nchekwa folda Numix na Numix
Na folda ahụ .na-etinye na folda Numix (GTK)
Ugbu a ị na-ahọrọ isiokwu ndị dị na ntọala XFCE.
Achọpụtara m na ọ bara ezigbo uru maka ndị superfans nke distro a. Ọ dị mma ịhụ mgbe sọftụwia, ma ọ bụ karịa n'efu ma ọ bụ karịa na-akwụghị ụgwọ, na-aga n'ihu.
Achọrọ m: Enwere m olileanya na maka ụdị Fedora ọzọ pc ga - apụta nke nwere nhọrọ ịwụnye ya, n'ihi na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ga - abụ ọtụtụ ihe, mana karịa ha niile enwere m nkwenye siri ike na ọ dị iche, ihe ọ na - enweghị, ọ na - enye m nke m na-agaghi enwe, sọftụwia nwegasịrị. Ike nke Fedora-dị ka ndị nke ọzọ - nke ọ bụla ha na-eme gosipụtara
Ghọta na ị bụ onye Red Hat beta-tester ma họrọ ịwụnye GNU / Linux ọzọ nke ụlọ ọrụ nkeonwe na-akwadoghị.
Ekele sitere na ndịda.
PS: Enweghị m ike inyere ya aka, rịọ m mgbaghara na "ndị na-emetụ geeks."
Kwụsị ikwu okwu nzuzu. Fedora na - etolite ma na - akwado sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma ọ bụrụ n’amaghị ihe nke ahụ bụ, aga m aghọta okwu gị. Abụọ Red Hat na ị na-erite uru na ọrụ nke nkesa a, nke na-agbanwe agbanwe mgbe niile.
Zaghachi na pamp
Pamp na-akwado ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ mana ọ na-abịa na femụwe na-anaghị akwụ ụgwọ, ọ bụ ya mere na ọ bụghị n'ime fsf distros
ka anyị hapụ extremism, microsoft na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ wdg jikọrọ aka na mmepe nke Linux, ha agaghị eji Linux ka ọ ghara ịbụ beta tester nke ndị a?
ianpock otu ihe ahụ na-eme ubuntu ọbụlagodi fsf akatọla ubuntu karịa fedora. na-ekwu na o nwere spyware si amazon na n'elu ya ọ dịghị adụ free
ụmụ okorobịa, ụmụ okorobịa ... ebe a enweghị oke egwu ma ọ bụ ụgha. Ọ bụ ajụjụ na anyị agaghị ahapụ, dị ka o kwere mee ma mara, na otu azụmahịa (yana mkpa ha karịsịa) na-achịkwa nghazi, onyonyo na mmalite nke sistemụ arụmọrụ nwere ike ịdị na pc gị. Fedora na-ezute ihe mgbaru ọsọ ndị a maka Red Hat. Ugbu a ka Centos na-eme.
Ihe ndi ozo di na mmepe ahia tinyere Suse na Ubuntu.
PS: ekwesịrị m ịkọwapụta na ọdịmma nke ndị ọrụ abụghị nke ụlọ ọrụ ahụ?
... Maka 10 pesos ọzọ anyị na-etinye conditioner, ya mere o nwere na-egbuke egbuke ma na entrepreneurial isi!
Mana ghọta na ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma ị nwere nnwere onwe ịgba ọsọ, gbanwee, mụọ ma kesaa ya.
Na mpaghara ọkachamara ma Fedora na Red Hat na-akwado nkwado nke ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ na ọbụna Suse na-erite uru na ya.
daryo nke azịza ya 18. Abụghị m onye na-emebiga ihe ókè (abụ m onye na-emebiga ihe ókè na anaghị eji sistemụ, ebe ahụ ma ọ bụrụ na m kwenyere na gị) dịka ị nwere ike ịhụ, azara m gị Ubuntu (Ọ dị mma Lubuntu n'ezie) Naanị m na-ekwu ya n'ihi na ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ bụ 100% Free Software na nwere na-abụghị free femụwe. Ma karịa Ubuntu mara mma. Enwere m ike ikwenye gị ya n'ihi na fedora / centos / stella distros mgbe ọ bụla m jiri ha, wifi arụ ọrụla nke ọma maka m na etinyeghị ọkwọ ụgbọala ọ bụla (enwere m b4318) kama na Ubuntu ee.
PS: Echeghị m na na lubuntu enwere m amazon-spyware.
Agunyeghi ngwugwu ndi anaghi akwụ ụgwọ na patenti. Nwere ike ịlele ha free software ụkpụrụ nduzi na ha bụ ndị siri ike.
Naanị ihe anaghị akwụ ụgwọ bụ femụwe.
Mana ihe m na-ekwu bụ na ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ n’obodo. Site na ịmepụta ngwanrọ n'efu, onye ọ bụla na-erite uru, ọ bụghị naanị Red Hat. Ya mere, bịanụ ajọ mbunobi gị. N'ihi na ekele Fedora ọtụtụ teknụzụ emezila.
Daalụ maka ndụmọdụ!
Enweelarị m Gnome 3.14 Antergos nke ọma. Bụ onye Gnome 3.14 Onwere onye ma uru Fedora 21 nwere bara uru? Ọ dị ọsọsọ? Ọ ka mma karịazi ya?
Niile nyocha ahụ na-ese ya "nnukwu!" mana ahughi ihe obula ihe ozo ozo 3.14 distro enweghi ...
Ọ na-enye m na m ga-wụnye ya ọzọ nkebi na m ga-ejedebe na abụọ hà usoro 🙂
Red Hat na-akwụ ụgwọ ọrụ Gnome nke ọma ka njikọta nke Gnome na Fedora dị mma. Ekwadoro m ka ị nwaa ya ma ị ga - ahụ :).
Ezigbo onyinye 🙂
Zaghachi Mario García
Ezi onyinye !!!!!
Rui Quaresma dijo
Ndewo, enwere m mmasị na nkọwa nke Fedora 21, ozugbo etinyere ya, ọ ga-ekwe omume melite ụdị "mkpụrụ edemede" (fontconfig-infinality) ugbu a, m na-eji openSUSE 13.2 na ụdị edemede a na fedora enweghị ike ime 21 ekele nyere ekele
Zaghachi Rui Quaresma
Gbalịa Fedy, ọ nwere nhọrọ iji melite nsụgharị ederede (n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ).
Don't nwere gị repo maka F21 ma ma ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu.
su -c «curl https://satya164.github.io/fedy/fedy-installer -o fedy-installer && chmod + x fedy-nhazi && ./fedy-installer »
Mepee ọnụ na nbanye dị ka mgbọrọgwụ. Soro usoro ndị a:
Hichaa ọdịnaya a:
aha = Enweghi oke
agbanyere = 1
aha = Infinality - noarch
Chekwaa na CTRL + O ma mechie CTRL + X.
yum wụnye fontconfig-infinality
na njikere :).
Ezigbo mma post, ihe ọjọọ banyere Fedora nwere systemD, enwere ndị ọrụ nwere freebsd.
Zaghachi ka ị nweta
Ndewo, bia nyere aka daalụ meela dịka akọwara na nke a ma ọ gara nke ọma, ugbu a enwere m Fedora 21 isi mmalite nwere oke mma. Ọ ga-amasị m ịkele gị maka nnweta gị ma nyerekwa ndị chọrọ mkpụrụedemede Fedora 21 ezigbo mma aka iji kọwaa ebe a. Daalụ.
Ana m asị gị nnọọ :).
Peter, olee nke ka mma Fedora 21 ma ọ bụ CentOS 7?
N'uche m CentOS 7 ka mma, mana Fedora 21 Workstation na-abịa nso ma nwee sọftụwia na Gnome 3.14:)…
Kedu nkesa Linux ị na-eji, kedu ihe ị chere kacha mma iji rụọ ụdị ọrụ niile?
Kedu nkesa Linux ị na-eji? Kedu nke ị chere kacha mma ime ihe niile?
Ka anyị hụ Alask, Anọnyere m na FreeBSD 10.1 na sava ahụ na desktọọpụ na laptọọpụ m na-ejigide ọgba aghara dị ukwuu yana nkwado CentOS 7. Ọ bụ distro nwere ọtụtụ nchịkọta yana yana EPEL repo ọ dịghị ihe ọ bụla. N'elu ị ga-enweta nkwado afọ 10.
Esi m na CRUNCHBANG, ana m eji nkesa a eme ihe kemgbe afọ 3, ike gwụrụ m ma tụgharịa na Fedora ... ọ dị ezigbo mma. Enwere m olileanya na m ga-emikwu emi.
"Kedu ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye fedora" ???? otu dị ka mgbe niile, iwepụ ya.
Aịzik na-ezu ohi dijo
Ọ dị ezigbo mma na post gị, m tinye F21, eziokwu eziokwu, m ga-ekwupụta (dịka m hụrụ na ụfọdụ isiokwu ọzọ ebe a) na m bụ "distr-jummper" agbalịrị m [U / X / K / L] buntu, Debian, Mint , elementrị, na a ogologo etcetera nke m na-agaghịzi echeta, eziokwu bụ na echichi nke F21 yiri m nnọọ ngwa ngwa, na mfe (naanị dịtụ tangled n'oge ntuziaka nkewa ebe m ịnọgide na-enwe nkebi na W8.1). Eziokwu bụ na a na m anụ mmiri karịa Ubuntu-GNOME na igwe m bụ VAIO VGN-N350FE ochie na ntụkwasị obi (Intel Core Duo CPU T2350 @ 1.867GHz, 2GB RAM, 120GB HD [IDE]) na eziokwu bụ na ọ bụ Ihe nkesa nke gosipụtara arụmọrụ kacha mma (yana elementrị), naanị uru nke elementrị nwere na laptọọpụ m bụ naanị na elementrị laptọọpụ m na-agbanye na enweghị njikọ, mana ọ bụ agadi na eziokwu anaghị adịte aka ka nke ahụ enweghị isi. a ghaghi ijiko ya oge nile. Enwere m olileanya na ị ga-aga n'ihu na-enye afọ ojuju gbasara F21. Ekele si Coahuila, Mexico
Zaghachi Isaac Robles
Daalụ nke ukwuu ma enwere m obi ụtọ 😀
Hi Peter, ozugbo m tụgharịrị na Fedora 21, echichi masịrị m; ebe m wunye proprietary Ati drivers.
Naanị m na-emelite, mana enwere m ajụjụ, ebe nchekwa rpmfusion nwere nsụgharị 2: hapụ 21 ma hapụ ụlọ kwụsie ike. Kedu nke ị kwadoro?
M na-ajụ, n'ihi na ahụrụ m na ụlọ anụ ahụ emelitebeghị n'oge obere oge.
M gbanwere n'ihi na m na-achọ a ufọk ufene na ugbu a usoro, ma na m nwere ike na-enweghị emelite na ọnwa na-enweghị na-agbasa usoro.
M na-agbakwunye nsụgharị kwekọrọ na mbipute nke distro, n'ihi ya, m na-akwado ka ị jiri nsụgharị 21 n'efu na 21 enweghị onwe.
Naanị m ewepụla Fedora, ọ naghị amasị m na ọ nọrịị na desktọọpụ, o nyere m ọtụtụ nsogbu: nchekwa nchekwa, ha anaghị arụnye nke ọma, Firefox na-emechi, ahụrụ m obere ọmarịcha ndị nwe ụgbọala (fglrx).
Ugbu a, m nọ Arch, mana ugbu a achọrọ m Ciclyc distros, ike gwụrụ m ịlụ ọgụ na sistemụ ahụ.
Anọ m na-eche banyere Ubuntu (mana na-achọ ime ka ịdị n'otu) ma ọ bụ Lmint na Cinnamon, mana ihe m na-ahụ bụ mbipụta Ndozi site na otu ụdị gaa na ọzọ: 12.04 ka 14.04.
Ekele 😀 na ezumike (Febụwarị 14)
Kikin dị mma ebe ọ bụ na enweghị m nsogbu na Fedora na Gnome-shell ... Maka ọsọ nke nchekwa e nwere ngwa mgbakwunye ...
yum wụnye yum-ngwa mgbakwunye-fastestmirror
Kedu maka ndị ọkwọ ụgbọala nwe ụlọ ... Fedora na-awụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala anaghị akwụ ụgwọ ma ghara ịwụnye ndị nwe ha na ndabara ...
Ee, echere m na ndị ọkwọ ụgbọala nweere onwe ha, etinyegoro m nke ndị akwụghị ụgwọ n'ezie, yabụ m gbanwere ha mana mana, ọ masịghị m.
Ee, m ji kwa "fastestmirror", wdg ... Ma o nyere m echiche ọjọọ.
N'okwu m etinye m ụdị Xfce, n'ihi na achọrọ m ihe ọkụ. Ọ bụrụ na Arch dara m (nke kachasị mma), m ga-enye Fedora ohere ọzọ na Ubuntu na-esote. Enwere m eriri USB dị njikere maka nke ọ bụla 😀
Aga m enye Slackware ohere ọhụụ na ụdị ya bụ 14.2 nke a na-achọ ịkọwapụta: D ... Gịnị kpatara ya? By KDE 5, XFCE 4.12, LXQT na site na:
Kedu nke dịlarị maka 14.1 mana na 14.2 ọ ga-esonye ya na distro ... Ma dabaa na ntuziaka ndabere mkpebi na Slackware ...: D.
Mba, anaghị m enwe mmasị ịnwale ọzọ. Amaara m na Slackware dị ezigbo ike, mana ọ naghị adịkarị ma ọ bụrụ na ihe emee, enweghị ọtụtụ akwụkwọ maka ya; ya mere ugbu a, ana m aga Ubuntu, ma ọ dịkarịa ala, amaara m na naanị ihe nwere ike ịgbanye m bụ ịdị n'otu. Ma m ga-agba mbọ ime ka ọ dị mfe.
Kedu mgbe a hapụrụ SlackWare 14.2? Enwere m nchegbu ... 😉
Ndewo @AleQwerty, site n'ihe m maara, ọ ga-abụ na njedebe nke ọnwa Maachị ma ọ bụ mbido Eprel :)…
@ kik1n Naanị ihe Ubuntu ga-enye gị na ịdị n'otu ya ga-abụ nkịta na nchịkọta ndị na-abịa site na ngalaba ule na-adịghị agbanwe agbanwe nke Debian ... Ọ kachasị mma ịnọ na Arch karịa iji Ubuntu: D.
Ee, ahụrụ m, atụbara m ọnọdụ eserese na-anwa ime ka ịdị n'otu dịrị.
Aga m agbali ịnọ na arch ruo mgbe ịhụnanya m nwere maka oSUSE laghachi.
Ọ dị mma, daalụ @ petercheco Aga m a atta ntị 😉
Ana m ekele gị nke ukwuu maka iburu nsogbu iji mee ka ihe dịrị anyị ndị ọhụrụ mfe. Adị m ọhụrụ nye fedora, m na-achọ ịnwale ya. Mgbe echichi ahụ amalitere m ndụmọdụ gị mana wget arụghị m ọrụ ... agbanyeghị na ọ rụrụ ọrụ dị ka nke a:
su -c 'dnf wụnye –nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm'
Ihe m nwetara na websaịtị ọzọ, ị nwere ike ịkọwa m ihe kpatara ya?
ekenekwa m unu ooooooo !!!
Ndewo na-ekele gị nke ukwuu maka otito :). Na wget ihe ị na-eme bụ naanị ibudata ngwugwu ahụ ị ga-etinyerịrị ya site na ịpị ya ugboro abụọ ma ọ bụ site na ime yum wụnye rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm && yum install rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Ihe ị mere bụ ibudata ma wụnye n'otu oge site na iji mmemme Fedora ọhụrụ (DNF) nke dochie YUM ochie.
Nicolas Rincon dijo
Ezi post, ekele, lee, emechaala m ntinye post na fedora 21, na enwere m nsogbu mgbe m na-etinye sọftụwia site na sọftụwia ahụ, ọ bụghị ngwa niile nwere bọtịnụ awụnyere, mgbe tupu ha emee, na mgbe m gbalịrị wụnye Ngwa m tinyere mgbọrọgwụ m gafere ma ọ na-agwa m na enwere mperi na nbudata ahụ, ị ​​nwere ike inyere m aka. Daalụ
Zaghachi Nicolas Rincon
Ndewo, Fedora software center nwere nsogbu dị iche na nke ahụ bụ na ọ na-arụ ọrụ na isi ala ma ọ bụghị na repos dị ka rpmfusion, wdg ... M na-adụ gị ọdụ ka ị wụnye yumex nke na-enweghị nsogbu.
Maka Fedora 21 na tupu:
yum wụnye yumex
Maka Fedora 22 na mgbe e mesịrị:
dnf wụnye yumex-dnf
Ezigbo onyinye, a na-enwe ekele
Ekele si Lonquimay, Araucanía, Chile
Ezi post, mana kedu ka esi etinye ngwa dika ndi egwusi egwu, office, burners and browsers without internet in fedora 21?
Na-enweghị ịntanetị, ị ga-emepụta nchekwa mpaghara site na dvd zuru ezu:
Etu aga-esi nweta kọntaktị ehichapụ na Gmail